ဆုံဆည်းရာ: အောက်တိုဘာ (၅)ရက်နေ့မှာ ထွန်းညှိမယ့် အမှန်တရားရဲ့ ဆီမီး…
အောက်တိုဘာ (၅)ရက်နေ့မှာ ထွန်းညှိမယ့် အမှန်တရားရဲ့ ဆီမီး…
အမှန်တရားမြတ်နိုးသူတိုင်း မိမိတို့ရဲ့ ရင်ထဲက အမှန်တရားဆီမီးတိုင်ကို နိုင်ငံအနှံ့ အလင်းလက်ဆုံးဖြစ်အောင် ထွန်းညှိသွားကြဖို့ကို (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုဌေးကြွယ်က အခုလို ရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်းခြွေခဲ့ပါတယ်…
တန်ခိုးကြီးဘုရားများ၊ ဗလီများ၊ ဘုရားကျောင်းများ အားလုံးမှာ ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ ပြုလုပ်ကြပါမယ်. ဖယောင်းတိုင်တွေကို ထွန်းညှိပြီးတော့ ဆုတောင်းကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုရာဇ၀တ်မှုမျိုးကိုမဆို ကျူးလွန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ စနစ်၊ မုဒိန်းမှုတွေ၊ လူသတ်မှုတွေ၊ ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေ၊ လုယက်မှုတွေ ကြိုက်တဲ့ရာဇ၀တ်မှု မှန်သမျှကို ကျူးလွန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ စနစ်ကို ကျွန်တော်တို့ လက်မခံတော့ဘူး။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းတလျှောက်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေ၊ ငိုရှိုက်သံတွေနဲ့ နာကြည်းတောက်ခေါက်သံတွေ၊ သံဃာတွေရဲ့သွေးတွေ အားလုံးအတွက်ကို ကျွန်တော်တို့ တုံ့ပြန်ကြရပါတော့မယ်။
အဲဒီ့ကြေကွဲမှုကို ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်မှုနဲ့ တုံ့ပြန်ပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ တုံ့ပြန်ပါမယ်.
Posted by Yan at 10:28 AM